Milaza Ho Nandresy Indray Ny Twitter i Rosia, Kanefa Ito No Tena Nitranga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2015 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Deutsch, English
Nanamarina androany vao maraina be ny alikan'i Kremlin mpiandry ny media, Roskomnadzor, fa vitany ny nanery ny Twitter “hamafa rohy miisa 32” izay nanitsakitsaka ireo lalàna Rosiana. Milaza ihany koa Roskomnadzor fa mitohy ny fitadiavana marimaritra iraisana amin'ny Twitter mikasika ny “lisitry ny trosa” lavalava kokoa.
Tsy vao voalohany izao ireo Rosiana mpanivana no milaza fa nahavita nandresy lahatra ny Twitter mba hanaraka ny fangatahana fanesorana. Sahala amin'ny teo aloha, tsy mitombina ary mamitaka ny filazàn'i Maosko androany hoe “namafa rohy miisa 32” ny Twitter.
Twitter, miaraka amin'ny Google, Vimeo, ary Reddit, ireo no orinasan'ny Aterineto efatra hany nanatanteraka ny fangatahana fanesorana natao ho any amin'ny “Chilling Effects Clearinghouse“, tetikasan'ny Electronic Frontier Foundation ary sekoly maro fianarana lalàna, mba hanandràtana hatrany ny fangaraharàna. Araka ilay angon-drakitra, naharay taratasy avy amin'ny Roskomnadzor ny Twitter ny 27 May 2015, izay mangataka ilay vohikala mba hibahana rohy samihafa miisa 53, tao anatin'izany ireo bitsik'ireo olon-tsotra sy ireo kaonty Twitter iray manontolo mihitsy.
Namaly ny fangatahan'i Roskombadzor ny Twitter, nampiasa ny fitaovana mahazatra azy “Firenena-Mihazona-Votoaty” tamin'ny 32 tamin'ireo bitsika, ary nanao azy ireo tsy ho afaka hitan'ny olona izay manana mpihazaka ao amin'ny kaontiny hoe mipetraka ao Rosia. (Tena mora kely ny manova io mpihazaka io.)
Ito bitsika ito izao voatazona ho an'ireo mpampiasa Twitter voarakitra ao Rosia:
15 Janoary 2015. Kianja Manezh. Hiresaka ny didy farany [ho an'i Navalny] izahay.
Ito bitsika ito indray tsy voatazona:
Efa nahasarika RSVPs miisa 12.000 sahady io hetsika io, ary voaasa ny 58.000 hafa.
Tsy nandray fepetra kosa ny Twitter tamin'ireo fangatahan'ny Roskomnadzor miisa 21, tafiditra ao anatin'izany ireo fangatahana fanesorana tanteraka ny kaonty Twitter 11. Ireo kaonty izay an'ny mpikatroka mafana fo miaro ny tontolo iainana Yevgeniya Chirikova, mpanohana ny fizakàntena ara-politika Siberiana, ny kaontin'ilay Euromaidan malaza be, ary ireo hafa koa, no sasany amin'ireo rohy tsy vitan'ny mpanivana Rosiana ny nibahana azy. Nandà ny hibahana ny fidiran'ireo Rosiana amin'ireo bitsika maro be avy amin'ireo olona mpanohitra malaza ihany koa ny Twitter, sahala amin'ireo lahatsoratra avy amin'ilay mpaka sary Rustem Adagamov sy ilay olo-manan-danjan'ny media malalaka Alexander Vinokurov.
Niorina tamin'ny fifandonana tamin'ny Facebook izay tamin'ny faran'iny taona lasa iny ny olana faran'ny Roskomnadzor niaraka tamin'ny Twitter.
Ny 20 Desambra 2014, nanaiky nibahana ireo Rosiana mpampiasa azy tsy ho afaka niditra tao amin'ilay pejinà hetsika natokana ho an'ny diabe ny 15 Janoary 2015 any ivelan'i Kremlin, ho fanohanana ilay gadra politka Alexey Navalny, ny Facebook. Tsy nanaiky velively io hetsika io mihitsy ny Facebook, kanefa kosa tsy nanaiky ny hibahana ny solon'ny pejin'ilay hetsika izay napetraka taty aoriana izy, izay vao maika nahazo haingana RSVPs maro noho ny azon'ilay hetsika tamin'ny voalohany. Ny farany, nivoaka roa herinandro nialoha ny didy ho an'i Navalny (fa tsy ny an'ny rahalahiny), ary afaka tamin'ny fampidirana am-ponja izy, nanafoana ny filàna hanao hetsika fanehoan-kery ny 15 Janoary.
Ny roa tamin'ireo fangatahana fibahanana lahatsoratr'olon-tsotra rehetra nataon'ny Roskomnadzor ihany no tsy nikasika ireo bitsika milaza ilay hetsika fanehoan-kery ny 15 Janoary—diabe izay tsy nisy mihitsy. Tamin'ny fampiasàna ilay fitaovany “Firenena-Mihazona-Votoaty”, nibahana 30 tamin'ireny bitsika ireny ny Twitter, na dia tsy nanaiky nibahana ireo maro hafa izay mitovitovy amin'ireo ihany—saingy tsy nisy antony mazava—aza izy. (Nanaiky “nitazona” bitsika roa avy taminà vehivavy manana anarana hoe Oksana Vyolva ny Twitter, izy io dia niantso ny olona tao amin'ny tanànan'i Mineralnye Vody mba hanao hetsi-panoherana nasiônalista, ny faran'ny volana janoary, izay hoe hatao noho ny namonoan'ny andianà Kaokaziana Tavaratra ny lehilahy Rosiana iray ny taona 2014.)
Efa ho dimy volana taty aorian'ireo hetsika resahana ireo ny Rosiana mpanivana no nametraka ireo fangatahana fanesorana rehetra ireo.